जबज नै नेकपाको प्रमुख राजनैतिक लाइन हो : देवकोटा - Sarokar Khabar
३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:५७
जबज नै नेकपाको प्रमुख राजनैतिक लाइन हो : देवकोटा
३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:५७0
२०३६ सालमा विद्यार्थी संगठनबाट राजनिति सुभारम्भ गर्नु भएका केशव देवकोटा तत्कालिन नेकपा एमालेका एक प्रभावशालि नेता हुन् । अखिल पाचौंको जिल्ला कमिटि सदस्य, पार्टी प्रजातान्त्रीक मञ्चको जिल्ला सदस्य, २०४६ सालको जनआन्दोलनको बाम मोर्चा सदस्य, २०४७ सालमा जिल्ला कमिटि सदस्य, २०५४ सालमा जिल्ला सचिव, आठौ महमधिबेसनबाट केन्द्रिय सदस्य, जनकपुर अञ्चल इन्चार्ज तथा २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्यको उपविजेता, त्यस पछि सल्लाहकार रहनु भएका देवकोटा हाल दुई पार्टी एकता पछि जिम्मेवार विहिन हुनु भएको छ । हाल उहाँ बागमती प्रदेश सरकारबाट भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सदस्यमा सिफारिस हुनु भएको छ । देवकोटासंग एनबी अधिकारीले गरेको कुराकानी ।
सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले के काम गर्दछ ?
भर्खरै नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको केन्द्रिय सदस्यको लागि बागमती प्रदेश सरकारले सिफरिस गर्ने एक मात्र सदस्यको रुपमा मलाई सिफारिस गरेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलले हिजोको सुकुम्बासि समस्या समाधान आयोग भन्दा पृथक र बृहत यसको काम र कर्तव्य रहेको छ । हिजो सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले भूमीहिन, अव्यवस्थित रुपमा बसेका मानिसहरुलाई जसको हातमा लालपूर्जा थिएन उनीहरुलाई मात्र लालपूर्जा दिने अधिकार थियो । तर यसको बृहत अधिकार रहेको छ । त्यो अधिकार भनेको भूमीका प्रकृतिहरु १० खालका रहेका छन् । ती भूमीहरुलाई व्यवस्थित बनाएर जनतालाई अधिकार सम्मपन्न बनाउने काम यस भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गर्दछ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या के–के छन् ?
अहिले मूलभूत समस्या भनेको दुईवटा नै हो । लालपुर्जा विहीन जग्गा छ । लामो समयदेखि खन जोत गरेर बसिराखेका छन् तर उनीहरुको हातमा त्यो जग्गाको पूर्जा छैन, उनीहरुले अन्य नयाँ काम गर्नको निम्ती बैंकमा धितो राखेर काम गर्न गर्न पाइरहेका छैनन् एउटा समस्या यो र अर्को समस्या बजार क्षेत्रमा ऐलानी पर्ती जग्गामा लामो समयदेखि घर बनाएर बसोबास गरेर व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका छन् उनीहरूको त्यो जग्गाको लालपूर्जा छैन् । यस्लाई अव्यवस्थित बसोबास भनिन्छ । त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ऐलानी पर्ती जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् । यस्ताहरुलाई हामीले लालपुर्जा दिन सकियो भन्दै उनीहरुले रात महसुस गर्छन् । अर्को समस्या सिन्धुली जिल्लाको हकमा भन्दाखेरी पनि गुठी जग्गाहरू पर्याप्त मात्रामा छन् । ती गुठी जग्गाहरूका जग्गाधनी गूठी संस्थान छ । मोहि व्यक्तिहरु छन् । उनीहरुलाई पनि मोहीबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ यो पनि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले हेर्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो अहिलेको कामको केन्द्रविन्दु बनेको लामो समयसम्म खनजोत गरेर जग्गामा बसोबास गरेका जनताहरुलाई यथासिघ्र उनीहरुको हातमा लालपुर्जा वितरण गर्नु नै हो ।
हाल नेपालको राजनैतिक अवस्थालाई तपाईले कसरि लिनु भएको छ ?
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था जतिबेला हिजो नेकपा एमालेको मात्रै नेतृत्वमा जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो त्यतिवेला भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको थियो । भारतले नाकाबन्दी गरीरहँदा खेरी एक्लै नेकपा एमाले राष्ट्रियताको सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दरोसंग भारतसँग लडाई लड्नु भयो त्यसको प्रतिफल यो भएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले केपी ओलीको राष्ट्रियता प्रतिको दरो अडानले नै नेकपा एमालेलाई दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुर्याउन यों मतदान गरेका हुन् । फलस्वरूप नेपालका दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु बिचमा एकिकरण गर्ने सहमतिका साथ संघीय निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचनमा एकता भएर, कार्यगत एकता भएर संयुक्त रुपमा चुनाबमा चुनावमा गइयो । हिजो केपी ओलीले लिएको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा लिएको अडानको कारणले आम नेपाली जनताले स्थिर सरकारको लागि मुलुकको समृद्धिको लागि भनेर केपी ओलीको नेतृत्वमा आगामी सरकार दुईतिहाइको बन्नुपर्छ भनेर भोट हालेको हो । तर आज के देखि रहेको छ भनेदेखि स्थिर सरकारको लागि नेपाली जनताले भोट दिई सकेपछि हामी भित्रै अब पार्टी एकता गरिसकेपछि कता–कता पूर्व एमालेहरुले हामीलाई छायामा पर्ने हुन की भन्नि भयबाट कमरेड प्रचण्डले मंसिर ४ गते एउटा सहमति गर्नुभयो । त्यो सहमति भनेको दुईवटा अध्यक्षको सहमति भइसकेपछि मात्रै हरेक निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जाने , सहमतिविना कुनै पनि निर्णय नगर्ने भन्ने एउटा विधान जस्तै गरी दुईवटा अध्यक्ष बसेर सहमति गर्नुभयो । अहिले आएर एक समय सम्म केपि ओली र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड दुईजना मिलेर पार्टीलाई अगाडि बढाउनुभयो । प्रचण्डलाई लागेको थियो होला अब केपी ओली धेरै समय रहनु हुन्न अनि त्यो पार्टीको सम्पूर्ण बाघडोर र राज्यसत्ताको पनि बाघडोर आफ्नो हातमा आउँछ । केपि ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने र आफूले कार्यकारी अध्यक्ष भएर बस्ने भनेर सम्झौता गरियो । तर आज आइसकेपछि आफुले सोचे अनुसार त भएन , अनि के गरियो त भन्दाखेरी विभिन्न बहाना बनाएर विभिन्न परिवेशहरु सिर्जना गरेर ओलीलाई अल्पमत बनाउने र हाम्रो पार्टीको अन्तरिम विधानमा व्यवस्था भए अनुसार बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अल्पमतमा पारेर पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई सरकारबाट पनि हटाउने अर्थात् प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउने र पार्टी अध्यक्षबाट पनि हटाउने खालका खेलहरु खेल्न थाले ।
मुलत यो खेल कहाँबाट सुरु भयो भन्दा अहिलेको वर्तमान सरकारले महाकालीको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको खण्डलाई नेपालको नक्सा भित्र कायम राखेरर एउटा नक्सा जारी गर्यो त्यसको लगत्तै अर्को नागरिकता सम्बन्धी विधेयक नेपालको नागरिकले कुनैपनि विदेशी नागरिकसंग विवाह गरि ल्याएको अवस्थामा सात वर्ष पछाडि मात्रै उसले आफ्नो अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति निवेदन दिनु पर्नेछ भन्ने एउटा विधेयक संसदमा छलफलको निम्ति आई रहेको सन्दर्भमा ओलीलाई अपदस्त गर्ने योजनाहरु रचियो । यो दुर्भाग्यपूण हो । किनभने एकातिर भारतले नेपालका सीमाहरु मिच्दै गई राखेको अर्कोतर्फ त्यसको विरुद्धमा दह्रो रुपमा केपी ओलीको सरकार लागिराखेको लडाइ लडि राखेको र विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता सात वर्ष नपुगी दिनुहुँदैन भनेर संसदमा प्रस्ताव आइरहदा अनयास ढंगले केपि ओलीलाई सरकारबाट पनि हटाउने र पार्टीको अध्यक्षबाट पनि हटाउने खालको खेल खेलियो । यसले के देखाउँछ भने देखि यो स्याल कराउनु र बाख्रो हराउनु भनेजस्तो मात्रै होइन यो योजनाबद्ध ढंगले केपी ओलीलाई हटाउने भारतको इशारामा हामी भित्रैका नेतृत्व तहमा रहनु भएको नेता बाटै परिचालित भएको हो की भन्ने आशङ्का लाग्दछ ।
उसो भए यो सवै पार्टी भित्रको गुटबन्दिको खेल नै हो ?
अव पार्टी भित्र गुट छदै छैन भनेर त भन्न सकिदैन । पार्टी भित्र स्पष्ट गुटबन्दी छ । एउटा गुट प्रचण्डले गरेको देखिन्छ । यो गुट उपगुट भन्ने भन्दा पनि निहित स्वार्थसिद्ध गर्नको निम्ति कसैको गोटि बनि रहेका छन् भन्ने देखिन्छ । अहिले सरकारले गरेका कामहरुमा कहाँ नराम्रो देखिन्छ ? भर्खरै स्थायी समितिको बैठक बसेर सरकारको कामको समिक्षा गरेको छ । सरकारले अत्यन्त राम्रा कामहरु गरेको छ यसको प्रचार जनस्तरसम्म लैजानुपर्छ भनेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । केही समय पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले सरकारले गरेका कामहरु राम्रा छन अरु बाँकी कामहरु यो यो किसिमले सुधारेर जानुपर्छ भनेर सुझाव दिने अनि लगतै केही समय पछाडि यो सरकारले केही पनि काम गरेन भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्त गर्न खोज्नु भनेको अब केपी शर्मा ओली रहिरहे आफू सत्तामा पुग्न सकिँदैन त्यो पार्टी सत्ताहोस या राज्यसत्ता होस कुनै पनि सत्तामा हामी पुग्न सक्दैनौ भन्ने डरले यो सवै काम सुरु भएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ । आम नेपाली जनताले यो सरकार ५ बर्षको लागि भनेर निर्वाचित गरेका हुन् । सरकारले राम्रोकाम गर्दा गर्दै विचमा त्यो सरकारलाई बिचमा अपदस्त गर्न खोज्नु त्यो पनि हाम्रो प्रतिपक्षी दलबाट होइन आफ्नै पार्टीबाट आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेता नेतृत्बाट प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ के ?
सिन्धुलीमा तपाईले पनि ओलि गुटको नेतृत्व गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि छनी ?
मैले गुटको नेतृत्व गर्नु भन्दा विधि र विचारको नेतृत्व गरेको हो । म स्वर्गीय नेता कमरेड मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको विचार जनताको बहुदलीय जनवाद यो विचारले नै मुलुकलाई समाजवादमा पुर्याउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । यो विचारकै आधारबाट पार्टी आज दुई तिहाई सम्म पुगेको छ । यदि यो विचारका आधारमा हामी अगाडि बढेका थिएनौ भने देखी अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार बन्दैन थियो । यसकारणले जनताको बहुदलीय जनवादको विचारलाई नै स्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो भन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन । अहिले अन्तरिम विदान दस्तावेदमा जनताको जनताबा भनेर जुन लेखिएको छ । त्यसको भित्री सार पनि जनताको बहुदलिय जनवाद नै छ । मैले के भन्ने गरेको छु भनेदेखी यो जनताको जनवाद भनेको कुकुरको टाउको राखेर खसीको मासु बेच्ने कुरा नगरौ किन भने भित्र जम्मै जनताको बहुदलीय जनवादको कुराहरु छन् दस्तावेजमा बाहिर जनताको जनवाद भन्नुको अर्थ रहन्छ ? त्यसैले हामीले लिएको सिद्धान्त जे हो त्यसले अगाडि सारेर जानु पर्दछ । त्यो विचार अगाडि सारेर जादा कसैले मलाई केपी ओली को गुटको मान्छे भनेर विल्ला लगाउछ भने त्यो विल्लासंग मेरो कुनै असहमती छैन ।
जिल्लामा स्थानीय तह र पार्टी विचको समन्वय छ कि छैन ?
सिन्धुली जिल्लाको हकमा कुरा गर्दा मैले पार्टी कमिटि नेतृत्व र स्थानीय तहको हकमा मैले समन्वय भएको देख्दिन ।
जिल्लामा पार्टी र स्थानीय सरकारविच समन्वय किन हुन सकेन ?
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न दिइराखेको अवस्था छ । जिल्लाका नेताको चाहना भएको ठाउँमा आफ्ना मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने, योजना बनाएर दिने कामहरु भएका छन् । आफूसँग असहमत भएका मान्छेहरुमा वेवास्थागर्ने, कुनै किसिमबाट घेराबन्दी गर्ने अप्ठ्यारोमा पार्ने आफ्नो अप्ठ्यारोमा पारि सके पछि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने यो खालको योजना बनाएर अगाडि बढेको देखिन्छ । अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने र त्यो समस्यालाई समाधान गर्न म संग आओस, झुकोस अनि मैले त मेलमिलाप गराइदिन्छु भने वातावरण सिर्जना गर्ने आफै झाक्री आफै बोक्सी बन्ने काम अहिले जिल्ला नेतृत्वले गर्दै हड्निु भएको छ । पार्टी नेतृत्व संगठन मजबुद बनाउने भन्दा पनि अपराध मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छ यसले पार्टीको हित गर्दैन । समग्रमा म के भन्न चाहान्छु भने जनप्रतिनिधि पनि स्थापित हुनु प¥र्यो र पार्टी पनी स्थापीत हुनु प¥यो । जिल्लाभरी एउटा विकासको योजना बनाएर जिल्लाको विकास कसरि गर्न सकिन्छ भनेर योजना दिनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यहाँ त डाँडा–डाँडामा भ्युटावर, नदीमा स्वीमिङ पुल हाम्रा नेताले दिएको विकासको मोडेल यस्तो छ । विकासको नाममा डोजर विकासको अवधारण दिएको छ । चेतनाको भर्ने काम गर्न सक्नु भएको छैन ।
स्थानीय सरकारमा नेकपाबाट निर्वाचित भएका सरकार प्रमुखहरुले राम्रो काम गरेनन् भनेर प्रचार बाजी गरिदैछनी ?
स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधिहरुले थुपै्र कामहरु राम्रा गर्नु भएको छ । राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रा काम गर्नेलाई सुझाव सहित दण्डित गर्ने काम पार्टी नेतृत्वको हो । त्यो यहाँ छदै छैन् । कामको तौल तरिका सिकाउने काम पार्टी नेतृत्वबाट हुन सकेन । जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित भै सके पछि विकास कसरि गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिन पथ्र्यो त्यसो पनि हुन सकेन । गाउँस्थतरका तल्ला कमिटि र गाउँपालिका संगको सम्बन्ध जुन हनु पर्ने हो हुन सकेको छैन् । नेतृत्वले सहि बाटोमा हिड्न सिकाउने, आफु हिड्ने हो भने स्थानीय सरकारले गरेका कामहरु जनस्तरमा आफै प्रचार हुन्छन् । जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्ने र उनीहरुले कही कतै नराम्रा काम गरेको भए उनीहरुलाई सल्लाह दिएर सुधार गर्न लगाउने काम पार्टी नेतृत्वले गर्नु पर्ने हो त्यसो हुन सकेको देखिदैन । पार्टी नेतृत्वको चाहाना नै नभएपछि जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामको प्रचार प्रसार कसरी हुन सक्दछ ?
संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेका कामलाई कसरि मुल्याङकन गर्नुहुन्छ ?
केन्द्र सरकारले गर्ने ठूला आयोजनाहरु हेर्ने सरकारले गर्ने काम मलाई लाग्छ । अहिलेको अवस्थामा केही यस्ता कामहरु भन्दा बाहेक अरु थुप्रै कामहरु राम्रो गरेको छ । हाम्रै जिल्लामा हेर्दाखेरि पनि कमला र मरण खोलामा पुलहरु निर्माण गरेको छ । त्यो सबै काम संघीय सरकारले गरेको सरकारले पनि आफ्ना योजनाहरू कामहरु बनाउने बाटो बनाउने आदि कामहरु गरेको छ । कम नै नगरको होइन तर जुन किसिमले प्रदेश र सघ र स्थानीय तहविचको समन्वय हुन पर्ने हो त्यसो चाहि कम नै भएको हो ।
माधव कमरेडले स्थानीय तह चुर्लुम्म भ्रष्टाचारमा डुव्यो भन्नुभयो । सवै त्यसो हैन के राम्रा काम गर्ने पनि भ्रष्टचारी हुन त ? सवैलाई एउटै डालोमा हालिएको छ । अझ गृहमन्त्रीले स्थानीय तहमा भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने पुरै स्थानीय तह नै खाली हुन्छ भन्नुभयो । आफ्ना कार्यकर्ता प्रति नेताहरुलाई नै भरोसा छैन । नेताहरुले काम गर्नको निम्ति तल जनप्रतिनिधिहरु उपयुक्त खालका जनप्रतिनिधिहरु हामीले चयन गरेनौ । जस्लाई काम गर्ने तौल तरिका नै थाहा छैन, योजना बनाउने क्षमता नै छैन । समाजबादको स पनि थाहा नभएकाहरुलाई चुनावमा उठाउछौ । अनि कसरी समाजबाद प्राप्त हुन सक्दछ । समाजबाद प्राप्त गर्न त त्यसको जग बनाउनु पर्यो, जग भनेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह हो, स्थानीय तहले राम्रो काम गर्दै गयो भनेदेखी, जनताले त्यसको अनुभूती गर्ने छन् । विकासको अनुभूती समाजवादको अनुभूति गर्नको निम्ति त आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ योजना लिएर गयो भने कस्तो कार्यक्रम लिएर गयो भने देखि आर्थिक रुपमा जनतालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । विकासको मोडल त्यस्तो खालको तयार गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भनेदेखि समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नसक्छ । केन्द्रिय सरकारले समाजवादी कार्यक्रम ल्याएन भनेर हामी आलोचना गर्छौं । व्यवस्थामा गणतन्त्र आयो तर सोच पहिला कै रहेको छ । अधिकार स्थानीय तहमा छ संघिय सरकारले कार्यक्रम ल्याएन भन्नु वेकार छ । अरुसंग ऋण लिएर विकास निर्माण गर्नु परेको छ । यस्तो आर्थिक अवस्था हामीले अरुसँग ऋण लिएर जनताको विकास गर्नुपर्ने छ । रेमिटेन्सले चलेको मुलुक अहिलेको रेमिट्यान्स शुन्य जस्तै छ । सरकारले गरेका काममा असन्तुष्टि जनाउने पर्ने वेला आएको छैन । सरकारले समग्र रुपमा सन्तोषजनक रुपमा नै काम गरि रहेको छ ।
तत्कालिन नेकपा ऐमालमा हरदा जनकपुर अञ्चल इन्चार्ज हुनुभयो यि लगाएत अन्य पार्टीको जिम्मेवारी कुशलता पुर्वक निर्वाह गर्ने नेताको रुपममा चिनिएको कोशव देवकोटा दुई पार्टीको एकता जिम्मेवार विहिन हुनुहुन्छ । तपाईलाई पछि पारियो या तपाई आफै पछि पर्नुभयो ?
पार्टी एकता पछि म ओझेलमा परेको जस्तो देखियो । एउटै दापमा दुईवटा तरबार अट्दैन बास्तावमा यहि नै भएको हो । पार्टी एकता संगै एउटा न एउटन षड्न्त्र भई हाल्छ । शक्ति एउटा मात्र रहन्छ । त्यस्तै कारणले हुन पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । म उपस्थित भएकै कारण पार्टी नेतृत्वले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारी दिएको हो । जुन शक्तिहरुले केशव देवकोटालाई छायामा परोस भन्ने सोचेर विभिन्न् गतिविभिमा लागि राख्नु भएको छ त्यो सुर्यलाई हत्केलाले छेकेर रात परो भन्नु सरह हो । केशव देवकोटा स्वयम आफैले आफु राजनीतिक जिवनबाट बाहिरिनु पर्दछ भन्ने विचार आयो भने मात्र मलाई पछि पार्न सक्लान । तर मलाई असहयोग गर्ने विभिन्न षड्यन्त्र भै रहेका छन् । कतिपय बेला यस्तो पनि आउँदो रछ पछाडि बाट आफ्ना साथीहरूले सल्लाह दिने, उत्साह दिने, गालि गर्ने गरिएन भने नैरास्यता आउ््दो रहेछ । हिजोको इतिहास जुन माओवादीको द्धन्दको बेलामा सिन्धुली जिल्लालाई कुनै पनि दुर्घटना बाट बचाएर आजको स्थितिमा नेकपा एमालेको आजको स्थितिमा ल्याउने जिम्मेवारी जुन मैले कुशलता पूर्वक बहन गरे मलाई लाग्दछ पार्टीको नेतृत्वलाई अहिले पनि स्मरण छ । त्यो भएर नै मलाई यो जिम्मेवारी दिएको हो भन्ने मेरो बुझाई हो । मलाई लाग्छ मैले फेरी पनि मेरो जुन खालको हिजो मेरे सक्रियता, क्रियाशिलता थियो साथीहरु सवैको साथ सहयोगले त्यसलाई पुनःजीवन दिलाएर अगाडी जानु पर्दछ । मलाई के लाग्दछ भने हिजो मलाई जस्ले मेरो राजनितिक जिवनमा साथ र सहयोग दिनु भएको थियो मलाई अवका दिनमा पनि साथ र सहयोग दिनु हुने छ भन्ने आशा गरेको छु ।
अन्त्यमा तपाईलाई केही भन्नु छ की ?
अहिले पार्टी भित्र देखिएको संकटको अवस्था रहेको छ । यो व्यक्ति टकरावको संकट हो । नेताहरुले सिमित दायरा भित्र समस्या निकोलेकोमा त्यहि दायरामा समस्या समाधान गर्नु पर्दछ । पार्टी एक भएर जानु पर्दछ त्यसको विकल्प छैन । म यस सञ्चारमाध्यबाट के भन्न चाहान्छु भने सबै कुराको फैसला भनेको महाधिबेशनले गर्ने हो । सचिवालयको बैठकले, स्थायी समितिको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यी कुनै तहका बैठकले गर्दैनन् । सिद्धान्तको निरुपण र नेतृत्व चयन गर्नेकाम महाधिबेसनले गर्दछ । चाडो भन्दा चाडो महाधिबेसन गरेर यि सवै समस्याको हल गरिनु पर्दछ । मेरो विचारलाई जुन मेरो शुभचिन्तक मलाई माया गर्ने जनता कार्यकर्ता माझ पु¥याउने अवसर दिनुभयो तपाई र तपाईको सञ्चारमाध्यमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहान्छ । धन्यवाद !
सिन्धुलीमा १३ जनामा कोरोन संक्रमण पुष्टि
३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०२:०९0
MCC लिप्त राजनीति हाम्रो देश यस्तो देश वन्न पुग्यो जहाँ हरेक दिन एक न एक विषय वा मुद्धा वहश र चर्चाको शिखरमा हुन्छ । जुन विवादित विषयमा रहन्छ । देशलाई विकासको नाममा कंगाल वनाउने¸ गुलाम वनाउने विषयस
१९ भाद्र २०७८, शनिबार ०१:३१0
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल
सिन्धुली, १९ भदौ / नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिका लागि कांग्रेसका प्रभावसाली नेता उपेन्द्र पोख्रेलले सभापतिको उमेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ । शुक्रबार उहाँले आसन्न महाधिवेसनका लागि आफु योग्य र पार्टी
१८ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०३:३३0
विदेशमा ज्यान गुमाएका रामकुमारको परिवारलाई युनियनको मृत्युदावि भुक्तानी
सिन्धुली, १८ कार्तिक २०७७ बैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई युनिययन लाईफ इन्स्योरेन्स शाखा सिन्धुली मृत्यु दावि भुक्तानी गरेको छ । दुधौली नगरपाली ६ हर्षाहीका राम कुमार अधिकारी दनुवारको
१७ बैशाख २०७७, बुधबार ०२:३४0
स्थानीय तहलाई गैर सरकारी संथले गरे सहयोग
सिन्धुली, १७ बैशाख २०७७ यहाँका चार वटा गैर सरकारी संस्थाहरुले तीन वटा गाउँपालिकालाई सहयोग गरेका छन् । गाउँपालिकाहरुलाई कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाईरस विरुद्धको अभियानमा सहयोग गरेका हुन । वल्र्ड भि
केशव देवकोटाद्धारा केन्द्रिय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:५७
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:५७
कविता : दिउ अरुलाइ नै दोष दिउ ! ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:५७
सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सम्मानित ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:५७
सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:५७
प्लानद्धारा कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:५७
कोभिड–१९ अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:५७
गोलन्जोरमा कृषकलाई राँगा र बोका वितरण ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:५७
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोध ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:५७
दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:५७